सांसदहरु भन्छन हामी ठगियौं, अनुगमन खोई ? – ThePressNepal
सांसदहरु भन्छन हामी ठगियौं, अनुगमन खोई ?
बजार नियमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा भईरहेको बताएपनि सांसदहरुले भने आफै ठगिएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन हुनुपर्ने बताएका छन्
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले मुल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न आग्रह गरेका हुन् । समितिका सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजार मुल्यमा समानता नभएको, अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजार मुल्य अनियन्त्रित भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले दिनदिनै अस्वभाविक रुपमा मुल्यबृद्धि भइरहेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । मुल्यबृद्धि गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुउनको माग छ । अस्वभाविक रुपमा मुल्यवृद्धि गर्नेलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत सरकारलाई उनको आग्रह छ ।
तेस्तै सांसद सुजाता परियारले पनि दिनदिनै मुल्य बृद्धि भइरहेको बताइन् । अनुगमन गर्ने अवस्था अहिले नभएकाले सम्बन्धित निकायलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले मुल्य नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिने निर्ण भएको जानकारी दिए । समितिमा छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सचिवालयलाई सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मुल्यवृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
Previous दशैँमा पनि सुनसान बसपार्क (फोटो सहित)
Next अवैध रुपमा विदेश पठाउने म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सांसदको माग
लगानी बोर्ड बैठक :७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति